Torohevitra Twitter momba ny marketing Twitter mahomby
Alarobia, Jona 23, 2010 Alahady Oktobra 19, 2014 Adam Small
Ity fampisehoana ity dia nanana fomba fijery maherin'ny 24,000 tao amin'ny Slouriare ary manana fampahalalana tsy mampino… tafiditra anaty sombin-tsoratra 140 isa na ambany avokoa. Hahita mpanoratra vitsivitsy aza ianao Martech Zone ao koa!
Ny fahasamihafana sy ny haren'ireto toro-hevitra ireto dia porofo manamarina ny herin'ny Twitter amin'ny maha mpampita vaovao azy. Aza atao ambanin-javatra ny herin'ity mpampita vaovao ity. Ity ny famelabelarana - Torohevitra Twitter 140:
Raha mitady fampahalalana fanampiny momba ny fomba hanampian'ny Twitter Marketing ny orinasanao ianao dia makà kopia iray Marketing amin'ny Twitter ho an'ny Dummies. Toy ny andiany Dummies iray manontolo, ny boky dia mandrakotra teknika fanombohana sy teknika avo lenta mba hampiasana mahomby ny Twitter amin'ny maha-mpampita vaovao azy.
PS: Tsy tena nanoratra an'ity lahatsoratra ity i Kyle, hoy i Doug. Lehilahy be atao i Kyle saingy te hanana antoka i Doug fa hahazo ny fiheverana mendrika azy amin'ny fampisehoana mahafinaritra sy boky mahafinaritra izy.
Tags: Kyle LacyTwittertoro-hevitra twitter
24 Jiona 2010 à 6:09
Misaotra tamin'ny antsoantso! Tena mankasitraka izany aho.
24 Jiona 2010 à 7:08
Tsaroako fony ianao nangataka ireto torohevitra ireto tamin'ny taon-dasa. Na dia marina aza ny maro amin'izy ireo, heveriko fa hahazo toro-hevitra vaovao ianao amin'ity taona ity.
30 Jiona 2010 à 3:54
Nahita andiana olona vaovao mahaliana mila harahina aho